Wathengela efulethini entsha futhi ufuna ukuqala ke ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze axazulule, futhi ifenisha uye ningagudluzwa? Ukuze ngokuzumayo wena owehla ukuvakashela izihlobo, futhi lutho ukubeka embhedeni? Okulindelekile shindig noma wabelane nabangani, ukubukela ibhayisikobho, nezihlalo azanele? Ekugcineni, unqume phumani ku imvelo, kodwa ungafuni uhlale emhlabathini? Kuzo zonke lezi zimo ikhambi ekahle kungaba usofa inflatable noma embhedeni. Abanye abathengi izesekeli efanayo engabaza, abababheka njengezinto kuphela imfanelo iholidi beach, futhi kuyize. Eliphezulu embhedeni inflatable kusuka nomkhiqizi elihle (isib, Intex noma BestWay), wathenga esitolo kuhloliwe, bangaba umsizi okuthembekile kulelikhaya. Sinikeza ukuhlangana ifenisha ezifanayo kangcono.
Ubani futhi lapho silwenza
Ngenhla brand ezimbili ethandwa kakhulu oshiwo, futhi uchaze ngokuningiliziwe. Intex - sha waseMelika odumile, kodwa labo bangathi ukuthengwa inflatable usofa brand - ke ukuthenga umkhiqizo livela China, kuyoba ngokwengxenye kwesokudla. Iqiniso lokuthi inkampani ezingaphansi eziningana emazweni ahlukahlukene, kuhlanganise Netherlands, France, Hong Kong. Kodwa-ke elawula inqubo ukukhiqizwa, izinga lomkhiqizo njalo ehhovisi main e-USA. Intex inflatable SOFAS ekhiqizwa iminyaka engaphezu 45 iminyaka futhi phakathi naleso sikhathi efanelwe izigidi amazwana esibonga evela kumakhasimende emhlabeni wonke.
BestWay womkhiqizo emakethe eyaziwa kusukela ngo-1993. Amamodeli ifenisha inflatable kusuka PVC futhi vinyl Avezwa ochwepheshe kusuka eU.S., eCanada, e-Europe nase-China. Minyaka yonke okunezinhlobonhlobo kuvuselela izimo ezahlukene ukuze ukuzilibazisa ongaphandle futhi ukusetshenziswa isikhala ekhaya njengoba imibhede / zihlalo.
Nge mattresses've inflatable eyaziwa eziningi kangaka. Kodwa umbhede inflatable noma kusofa - ke into entsha. Futhi ke kukhona ukhululekile futhi stylish design sunbeds. Futhi ekugcineni, uhlobo olufanayo (transformer) Kungenzeka ngezinye izikhathi ezihlukahlukene ukukhonza embhedeni usofa kanye lounge Chaise, kuye ngokuthi izidingo zakho.
Sofa Inflatable ngokuvamile uhlanganisa esihlalweni, backrest futhi yokubeka. Ngezinye izikhathi esikhathini esidlule, kukhona izimbobo esikhethekile amabhodlela noma izibuko. Kuleli kusofa kutfokomele kakhulu ukuze uhlale ngesikhathi iholide emvelweni, futhi ngesikhathi yimani isibindi, uma "dolobha" lezihlalo kwakungenele.
embhedeni Inflatable zifana kumatilasi, kodwa ngaphezulu ukuphakama, ukuze kayibuhlungu naye athi makavuke, kunalokho, ukuze uyolala. Ngaphezu kwalokho, kude phansi, ukufudumala. Ngezinye izikhathi imibhede inflatable ayanikezelwa nge headboard. kukhona onobuhle izinkampani olulodwa, kabili ngisho wamathambo emgqeni ngenhla.
Ubulula wesitoreji nokusetshenziswa. embhedeni Inflatable nomoya esebenzisa ugesi, isandla noma unyawo futha kumaminithi. A eligoqiwe oluthatha indawo encane kakhulu.
Amandla. usofa Inflatable noma embhedeni eyokusiza ngaphezu konyaka owodwa ngenxa yokuthi enziwa high PVC noma vinyl. Lena akuyona evamile lolwandle omatilasi ezingasetshenziswa kalula aphambane ngisho ukunyakaza eningenandaba!
umumo ergonomic kanye nomklamo stylish. Intex ifenisha inflatable noma BestWay has a Sakhiwo sangekhatsi ekhethekile. Uhlelo isekela uprights kwenza imibhede Amasofa obuqinile, nokunwebeka, amelana ukusonteka. Ngakho, endaweni yokuhlala ngeke "minza '! Attractive ukubukeka onobuhle ukunikeza ezihlukahlukene imibala, kanye zathuthelekela ohlangothini phezulu. By the way, sibonga zokulala yakamuva embhedeni / ukhukho ngeke sehla off.
Umswakama ukumelana. ifenisha Inflatable akuyona manzi, ngakho ungakhathazeki mayelana nalokho okuyoba ziphangwe ngemva ngephutha ezichithekile isiphuzo noma imibuthano e ezimanzi ukugeza amasudi.
Thermal ukushaqeka ukumelana. Yiqiniso, nge yesithwathwa ezinzima experiment akudingekile, kodwa uma libalele ngokwemvelo nge usofa inflatable nje akwenzekanga.
The kungenzeka self-ukulungisa. ifenisha Inflatable ngokuvamile iza isichibi self-Yesigcilikisha, okuzoba esisemqoka isidingo ukulungiswa eziphuthumayo.
Namuhla, ukuthenga umbhede inflatable - akuyona inkinga. Kukhona futhi phansi ezisekelwe Izitolo okudayisa, futhi ebonakalayo. Enye into - yini amanani futhi, okubaluleke kakhulu, umkhiqizo izinga ulinde wena. Indawo lapho uyakusutha kokubili ukuthi nomunye - esitolo online Mirintex.ru. Amamodeli SOFAS nemibhede etinhlotjeni letehlukene kakhulu. Kukhona futhi izihlalo inflatable, imicamelo. Ngokuvamile, kungenzeka ukuba bahlangane bona iqoqo ifenisha ezenziwe vinyl!
esifundeni eMoscow eMoscow izakhamizi uzokwazi sithathe ikhophi intandokazi nomunye izitolo ezimbili noma zilethwe yizithunywa. Ezinye izindawo eRussia, futhi, ngeke aphatheke kabi, kukhona ke ukulethwa imeyili, kanye nezinkampani zezokuthutha - partner esitolo online.
Uma sikhuluma lokukhokha, ungakwazi ukukhokha ngokheshi, thumela i-EFT, sebenzisa uhlelo lokukhokha "Yandex" noma imeyili amasevisi.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi lokho ifenisha inflatable nalapho ungathola ngempela onobuhle eliphezulu. Ziphathe ukuthenga - futhi kuyoba ithuluzi esisemqoka emnothweni, uyakwazi ukusiza ezihlukahlukene ezimweni!
Isikhumbuzo ku-Alexis II ku-Yoshkar-Ola
Uyini umehluko amacala ubugebengu? Izinhlobo emacaleni: ubugebengu kanye misdemeanors